» आज शनिबार : कस्तो रहला तपाईंको दिन ?
आज शनिबार : कस्तो रहला तपाईंको दिन ?
२४ बैशाख २०७९, शनिबार ०७:५०
तपाईको तालिकामा उचित समन्वय हुनेछ र सबै काम पनि समय अनुसार मिलाइनेछ । वित्तीय लगानी मामिलामा बढी ध्यान दिनुहोस् । आजको समयमा लाभदायक अवस्थाहरू प्रबल हुनेछन् ।
केहि समयको लागी पति र पत्नी बीचमा भइरहेको तनाब हटाइनेछ । परिवारमा पनि रमाइलो वातावरण हुनेछ । विदेशमा बस्ने कसैको चिन्ताले तपाईंलाई आज चिन्तित पार्नसक्छ । लामो समयसम्म सञ्चारको अभावका कारण आक्रोश र गलतफहमीहरू एक अर्का प्रति बढ्नेछन् ।
तपाईको अगाडि केहि चीजहरु उल्लेख गरे पछि पनि तपाईले आफ्नो साथीको शब्दहरु बुझ्न सक्नुहुन्न । तपाईंले आफ्नो पार्टनरको भावनाहरूको आदर गर्न सिक्नुपर्दछ । स्वास्थ्य: घाँटी दुख्दा समस्या हुनसक्छ । स्वास्थ्य- स्वास्थ्य परिवर्तन हुने मौसमको कारणले मन खिन्न हुनेछ ।
ग्राहकद्वारा भुक्तानी प्राप्त गर्न समय लिन सक्दछन । नकारात्मक विचारहरुमा तपाईलाई हावी नदिनुहोस् । भाग्यशाली रंग – सुन्तला, भाग्यशाली संख्या ४ रहनेछ । प्रेम: तेस्रो व्यक्तिको बढी हस्तक्षेपका कारण, साझेदारहरू बीच दूरी हुनेछ ।
क्यारियर: ठुलो व्यक्तिको अचानक परिचयको कारण तपाईले ठूलो र नयाँ रोजगारीको अवसर पाउन सक्नुहुन्छ । तपाईको मानसिक अवस्थाको असर तपाईको काम र स्वास्थ्य दुबैमा देख्न सकिन्छ । आफैलाई मानसिक सन्तुलित र प्रत्येक परिस्थितिमा सक्षम राख्ने प्रयास गर्नुहोस् ।
कहिलेकाँही तपाईको प्रकृतिले तपाईलाई मात्र समस्या गराउँछ । तपाईको सोचलाई सकरात्मक राख्नु महत्वपूर्ण छ । पैसाको मामलामा कसैलाई विश्वास नगर्नुहोस् र सबै निर्णय आफैले लिनुहोस् । स्वास्थ्य: टाउको दुख्ने र माइग्रेन बढी हुनेछ ।
पारिवारिक मामिलामा धेरै हस्तक्षेप नगर्नुहोस् र न त पुरानो नकारात्मक चीजहरूले वर्तमानमा हावी हुन दिनुहोस्। घरको एक वरिष्ठ सदस्यको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता हुन सक्छ । हेरचाह गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । तपाईं मानसिक तनाव महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं मानिसहरूलाई यो स्पष्ट रूपमा कुरा गर्न सक्षम हुनुहुनेछैन ।
मिडिया र अनलाइन सम्बन्धित गतिविधिहरूमा बढी ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस् । भविष्यमा, यी गतिविधिहरूले व्यापारलाई अगाडि लैजान्छन् । शेयर बजारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू आज होशियार हुनुपर्छ ।
आज भाग्य तपाईंको लागि राम्रो अवस्था सिर्जना गर्दैछ । आज तपाईको सपना र आशाहरुलाई पुर्‍याउने दिन हुनसक्छ । तपाईंको उद्देश्यमा केन्द्रित रहनुहोस् । यदि कुनै सरकारी काम ठप्प छ भने आज तपाईले यसमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
श्रीमान् र श्रीमतीको बिचमा मिठो मिजासको झगडा हुनेछ । प्रेम मामिलामा तपाईंको पार्टनरप्रति इमानदार हुनुहोस् । स्वास्थ्य- अपच र ग्यास समस्या तनाव र थकानको कारण बढ्नसक्छ । सकारात्मक वातावरण कायम गर्नुहोस् । भाग्यशाली रंग – हरियो, भाग्यशाली संख्या ४ रहनेछ ।
तपाईको क्षमता भन्दा बढी काम गर्नुपर्ने कारणले जिम्मेवारी तपाईंमा बढिरहेको छ र यो जिम्मेवारी पूरा गर्दा, तपाईंको स्वास्थ्य पनि प्रभावित हुनेछ । व्यक्तिसँग व्यक्तिगत दूरी नराख्ने कारणले, व्यक्तिहरू तपाईंको व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित कुरामा विवाद गर्न जारी राख्नेछन् ।
व्यापार क्षेत्रमा कुनै पनि सम्झौता वा लेनदेन गर्दा धेरै सावधान हुनुहोस् । तपाईलाई ठग्ने सम्भावना रहन्छ । व्यापार यात्रा पनि योजना गर्न सकिन्छ र तपाईंले उचित परिणामहरू पाउनुहुनेछ ।
ज्यो. पं. घनश्याम पोख्रेल (९८४१४७९७०७), ghanashyamgurujee@gmail.com